Fidirana Katekomena zandriny 2010 – FJKM Ambavahadimitafo Fidirana Katekomena zandriny 2010 |
Fidirana Katekomena zandriny 2010
Efa manomboka ny fampianarana Katekomena zandriny eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo. Isaky ny Alahady amin’ny 7ora sy sasany ny fampianarana ao amin’ny Akany Ralibera Daniel.
Koa manasa antsika izay te hiroso amin’ny Fiombonana Latabatra amin’ny Tompo hanatrika izany. Ny fianarana moa dia haharitra erin-taona latsaka eo, satria ny Alahady faha-3 ny volana Desambra no hanokanana azy ireo.
Tsy ho an’ny fiangonana eto Ambavahadimitafo irery ihany anefa ny fampianarana fa miantefa sy iantsoana ny olona avy any ivelany ihany koa.